Iyo software yekuwana kukosha kubhejera mukutengesa kwepamhepo
Kunyangwe iwe uchinge watove online kubheja ace, iyi yekutanga mitambo kubheja software inogona kuratidza kuve inobatsira kukubatsira kuti unzwisise nzira yekuwana iyo yakakurumbira kukosha bheji.
Isu tinowanzo verenga pamhepo kuti mikana chaiyo yechiitiko yakatove yakabatanidzwa mukukanganisa kwebhuki, izvo zviri pachena zvinovashandisira mukana wavo nekushandisa mutero (premium).
Betting Tipster inokupa iwe mukana, kana iwe uchinge wapinda fungidziro dzako (muzana) yemhando yechiitiko pazviratidzo 1-X-2 uye mikana isingaenzaniswi inopihwa nevabhuki, kuratidza izvo zvipingamupinyi izvo, dzidziso, mubhuki ari kupa iwe kune inobatsira mubhadharo muzana.
Nzira yekuwana kukosha kubhejera: kushandisa Betting Tipster
Paunenge uchinge watora pasi chirongwa ichi uye nekuburitsa zvinogoneka zviri mufaira, unozviwana uri pamberi pechimwe chete chirongwa chewindow, iine iwo akasiyana minda ekuisa data.
Kuruboshwe rwechirongwa (Kufungidzira Kwako) yako fungidziro ichapindirwa seperesenti yezvinobvira 1-X-2 mhedzisiro yemutambo wenhabvu.
Kudivi rerudyi panzvimbo (Book Odds) iwe unozopinda izvo zvipingamupinyi zvaunopihwa kwauri zveimwe mhedzisiro mikana.
Kana izvi zvaitwa, ingotinya pane bhatani pazasi (Chengetedza Matanho Anowirirana) uye chirongwa ichi chichaenderera mberi nekuenzanisa mikana inopihwa nezvakafanotaurwa.
Nzira yekuwana iyo kukosha kubhejera: dbvisa zviga kubva muprimiyamu
Chaizvoizvo iyi software ye tsvaga kukosha kubhejera yekutamba mitambo inobvisa zvoga mikana inopihwa nebhuki kubva kumutero yaiswa uye, kana iwe uchinge waenzanisa izvo chaizvo zvikamu zvinofungidzirwa nabhuki pamwe nezvikamu zvaunofungidzira nekupinda, zvinotarisa kana mikana yaunopihwa iri yakaderera kana yakakwira, maererano nemubhadharo, pane yako fungidziro yechiitiko chaunoda. kubheja.
Nenzira iyi, kana iwe uchikwanisa kuita fungidziro dziri nani pane idzo dzebhuki, munguva yepakati / refu iwe unenge uine mukana!
Kana mikana yaunopihwa nebhuki iri yakakura kudarika zvaunofungidzira, bhokisi rakanangana naro rinoshanduka kuita girinhi semufananidzo mufananidzo, zvichiratidza mukana wekubheja sezvo uine mutengo wakanaka unotarisirwa (EV +).
Izvi muchidimbu ndiwo akapusa asi anoshanda mabasa eiri kubheja software, Betting Tipster inopa kugona kubata kusvika kumatanhatu zviitiko, asi zviripachena kuti iwe unogona zvakare kuishandisa zvakachengeteka kuona imwechete mutambo.